အလုပ်အကိုင် အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာဘ၀တစ်ခုကိုရနိုင်ဖို့အတွက် သူဌေးကြီး Richard Branson ပြောတဲ့စည်းမျဉ်း ၈ ခု...
### Zawgyi Version ### ဗြိတိန် နာမည်ကျော် သူဌေးကြီး Richard Branson ကတော့ ၎င်းရဲ့ပထမဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းသူဟာ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေအများကြီးကို ထူထောင်ခဲ့ပြီးဒီထဲတွေမှာ Virgin Records ၊Virgin Airlines ၊ Virgin Express ၊ Virgin Mobile ၊ Virgin Hotels ၊ VirginCruises နဲ့ Virgin...
‘‘ ပါမစ်ပျောက် ’’ ၊‘‘ဂရန်သစ် ’’လျှောက်လို့ ရပေမဲ့ ရတက်မအေးနိုင်တာ က ‘‘မြေချပါမစ် မူရင်း’’ လက်ဝယ်ရှိသူတွေ...
### Zawgyi Version ### လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မှာထိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြစို့ ခုတလော အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်အေးသွားပေမဲ့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ပွဲစားများထိုင်နေကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတော့ …..ပုံမှန် ထိုင်နေကြ၊ ဆွေးနွေးကျ၊ တိုင်ပင်ကျဆဲ ရှိပါတယ်။ အကွက်လှကြောင်း၊...
### Zawgyi Version ### ရန်ကုန်တွင် တိုက်ခန်းဝယ်ယူခြင်းသည် မြေကိုပိုင်ဆိုင်မှုမပါဝင်၍ မြေပိုင်ရှင်၏ မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် တိုက်ခန်းအား ၀ယ်ယူခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မြေပိုင်ရှင်အား မြေငှားရမ်းခပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကန်ထရိုက်တာထံမှ ဝယ်ယူခြင်း၊ မြေရှင်ထံမှ...
ကိုယ့်အိမ်က မျက်နှာကြက်ကို အလှဆင်ဖို့အတွက် စိတ်ကူး (၅) ခု
### Zawgyi Version ### မျက်နှာကြက်ကိုကြည့်၊ ငေးမော တွေးတောတတ်သူတွေအနေနဲ့ မျက်နှာကြက်လေးကို အလှဆင်ထားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်လောက် နွေးထွေးတဲ့နေရာ ဘာများရှိဦးမှာလဲ? အိမ်ဟာ ကိုယ့်အတွက် နားခိုမှေးစက်ရာသာမက လုံခြုံနွေးထွေးမှုကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။...
သင်ဝယ်မယ့် မြေက ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်သလဲ ၊ မြေဆိုတာဘာလဲ သေချာသိဖို့လိုအပ်တယ်
### Zawgyi Version ### မြေဝယ်မယ်ဆိုတာ နဲ့ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝယ်မယ့် မြေက ဘယ်လိုမြေ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်၊ ဒီမြေပေါ်မှာ ကိုယ်ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်၊ ကိုယ်ဝယ်မယ့် မြေကို လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်အောင် နာမည်ပြောင်းလို့ရမရ ဆိုတာကို မဝယ်ယူခင်မှာ အသေအချာသိဖိုိ့...
Interior design ဒီဇိုင်းဆိုတာ ဘာလဲ
### Zawgyi Version ### အရင်ခေတ်တွေတုန်းက Interior design တခုကို နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရှင်တွေဆီကနေ ငွေကြေး အမြောက်အများပေးပြီး ဝယ်ယူခဲ့ရတာပါ။ အခုကာလမှာတော့ Interior design က မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အရေးပါလာနေတဲ့ အပြင် မြန်မာ Interior ဒီဇိုင်နာတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Interior design...
လယ်ယာမြေ ဝယ်ရောင်း လုပ်ကြရာမှာ မသိမဖြစ် လိုအပ်တာ ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ-၁၅) ပါ
### Zawgyi Version ### ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ပိုင်း မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ လယ်ယာမြေများကို အကွက် ရိုက်ပြီး ပြန်လည် ရောင်းချကြလို့ ဝယ်ယူနေထိုင်ကြတာကို ခရီးလမ်းတစ်ေ လျှာက်မှာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ တကယ်တော့...
ရွှေပန်းအိုး၊ ငွေပန်းအိုး စီးပွားတိုး
### Zawgyi Version ### တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေ၊ ရုံးခန်းတွေမှာ လှပတဲ့ပန်းအိုးကြီးတွေ အလှထားတာ တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီခေတ်မှာတော့ တရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ရင်လည်းဘဲ ဟိုတယ်ကြီးတွေ၊ ရုံးခန်းကြီးတွေမှာ ပန်းအိုးလှလှကြီးတွေကို ဟိုနားဒီနားဆိုသလို...